पाेखरामा भेटिइन् जादुमय स्वर भएकी १८ बर्षे युवती, सुन्नुहोस् उनको जादुमयी आवाज (भिडियोसहित)
Homeभिडियोपाेखरामा भेटिइन् जादुमय स्वर भएकी १८ बर्षे युवती, सुन्नुहोस् उनको जादुमयी आवाज (भिडियोसहित)
September 13, 2020 admin भिडियो 6282
पोखराकाे बाघ’मारा गाँउ समथर र सुन्दर छ । उक्त गाँउ बाघ’मारामा बस्ती बिस्तार भएको इति’हास धेरै लामो छैन। बाघ’मारामा धेरै मानिसहरु त्यहाँ घुम्न आउने गर्छन् । उक्त गाउँ अति सुन्दर छ ।
त्यस गाँउ लगायत अन्य गाँ’उमा धेरै लुकेका प्रतिभाहरु छन्, तर ती प्रतिभा बा’हिर ल्याउने भनेकाे नै मिडियाले हाे । त्यसैगरी त्यस बाघमाराकाे एक १८ बर्षिया सरिता आचा’र्यकाे सुमधुर स्वर बाहिरिएकाे छ ।
सरिताकाे बास्त’विक काहनी सुन्दा मन रुन्छ । उनकाे परि’वारमा बुवा आमा दाइ भाउजु र उनी छिन् । उनी’लाइ आफ्नाे आर्थिक समस्याकाे कारण उनले आफ्नाे प्रति’भा बाहिर देखाउन सकेकि छैन् । उनकाे भनाइ अनुसार उनले आफ्नाे परि’वारबाट साथ र माया नपा’एकाे बताएकि छिन् ।
सानै उमेरबाट गीत गाउन लागे:कि सरिता अहिले बाघमारा गाँउमा गुमनाम छिन् । उनले हि’मालय दैनिककाे कुरा’कानीमा आ’फ्नाे आर्थिक अबस्था निकै कमजाेर रहेकाे छ । काेहि क’सैले साथ र माया गरेर अघि बढाउन साथ दिनुहुन्छ भने अपेक्षा गरेकाे उनी बताउछिन् । – हिमालय दैनिक
आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस् विवरण
नायिका निता ढुंगानाको जन्मदिन आज, कती बर्षमा लागिन् उनी ? हेर्नुहोस्
September 1, 2020 admin भिडियो 7437
केहि समय अगाडी मिडियामा निकै नै भाईरल बनेका अर्जुन बिकका जिबनमा मेल खाने गित संगीत बजारमा दिनप्रति’दिन आईरहेका छन् । अर्जुन बिकको आफ्नै जिव’नमा मेल खाने गीत हिजो युट्युमा रिलिज भएको छ । भिडियोमा सारिका
August 2, 2020 Administer बिज्ञान प्रबिधि, भिडियो, मनोरंजन, समाचार 57860
अर्जुनको आमा अचानक रुदै मिडियामा, आखिर के भयो ?(भिडियो हेर्नुहोस)
September 1, 2020 admin भिडियो 6677
केहिसमय अगाडि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका कैलालीका अर्जुन वीकको यतिबेला जीवनशैली फरक बनिसकेको छ । पिठ्युँमा छोरा बोकेर रिक्सा चलाउने अहिले गायक बनिसकेका छन् । सञ्जालमा सेलिब्रेटी भन्दा कम चर्चा छैन उनको । तर, अर्जुनले